ZAHRA NAALEEYE: “Soomaalida ayaa farta lagu fiiqaa, oo waxaa la leeyahay Kenya ama Soomaaliya ayeey gabdhaha geeyaan” [WARAYSI] – somnieuws.com
ZAHRA NAALEEYE: “Soomaalida…
Jimciyadda qurumaha ka dhexeysa [Qaramada midoobay] ayaa 19-kii December 2011 qaraar ay soo saareen ku asteeyey in sannad walba 11 Oktoobar loo aqoonsado maalinta gabdhaha, waxaanna maalintaasi oo loo aqoonsaday maalin caalami ah, la gorfeeyaa dhibaatooyinka loo gaystay gabdhaha oo ay ka mid tahay kufsiga iyo dilka.
Zahra Naaleeye, waxay madax ka ahayd muddo ku dhow 30 sanno mashruuca ka hortagga nuuc kasta oo gudniinka gabdhaha dalka Nederlands, Sidoo kale waxay u dhaqdhaqaaqdaa ka hortaga tacadiyada loo gaysto haween waynaha caalamka.
Zahra waraysi ay siisay shabakadda Somnieuws ee ka faaloota arrimaha Soomaalida ku dhaqan dalka Nederland, ayeey kaga hadashay arrimo dhowr ah, waxaanna waraysigii la la yeeshay u dhacay siddatan:-
SU’AAL: Muddo dheer ayaad madax ka ahayd mashruucan ka hortagga gudniinka gabdhaha, adigoo ka mid ahaa gabdhihii ugu horreeyey ee dalkan yimid burburbkii ka hor, waxaad sawir koobban innaga siisaa sidii ay xilligaasi xaaladdu ahayd iyo sida xaalku iminka uu yahay.?
ZAHRA: Waddankaan aniga iyo dadkii ila socday qaxootinimo kuma iman, waxaan u imid inaan shahaadada master-ka “master programme” ku diyaarino markaan wax yar joogay waxaa Soomaaliya ka dhacay dagaalkii lagu riday Dowladdii. markii 90-meeyadii ay waxbarashadii ii dhammaatay waxaa billowday dagaaladii sokeeye, waxaana naga xirmay xiriirkii isgaarsiineed ee dalka, marka maadaama dagaal sokeeye dalkii uu ka dhacay aniga iyo ardaydii ila socotay waxaan dalkan waydiisanay qaxootinimo, kaddib-na waxaa billowday qulqulkii qaxootiga, waxaad moodaa wax waliba in ay ahaayeen silsilado isku xig-xigay. Arrimahan gudniinka markaas ayaa ka shaqo billaabay waxaa igu kafilay waxaa ii muuqatay in ay jirtay baahi xooggan oo loo qabay in dadkii imaanayay loo sheego shuruucda dalka ay ku cusub yihiin, anigu xilligaa fikir fiican ayaa ka haystay arrimahan, waxaan horay ula soo shaqeeyay wasaaradii haweenka iyo ururada xuquuqda haweenka iyo kuwa caafimaadka, dadkii Soomaalida ah ee qaxootinimada dalkan u yimid gaar ahaan hooyooyinka waxaa maskaxdooda ku qafilnaa caaddadii ahayd in gabdhaha la gudo markaas ayaa billowday “orientation” iyo inaan haweenka u bilowno wacyigelin.
SU’AAL: Soomaaliya markii la joogay, gabadha haddaan la gudin, weliba generation-adii hore, waa la takoori jiray, dhowr iyo 30-kii sanno ee u dambeeyay markii ay dadka diintu dhacday waa yaraatay gudniinkii gabdhaha, inkastoo weli gabdhaha la gudo, taas ma kuu muuqataa.?
ZAHRA: Haweenka Soomaalida ilaa 50-jir xittaa 40 jir aan iraahdo waa wada gudan yihiin, waaya-aragnimada ayaa dadka ku yarayd, gabadha haddii aan la gudin lama guursanaayo, sababtuna waxay ahayd; waxay un iska ahayd caado la iska raacay, waxaa jirta maahmaah duug ah oo Soomaalidii hore hal-hays u ahayd. “Caada la diidaa, carra ALLEEY leedahay” 30-kii sanno ee ugu dambeeyey dardartii iyo xawaarihii uu gudniinku ku socday wuu hakaday, inkastoo oo si xoog leh baadiyaha loogu gudo gabdhaha, haddana caasimada Muqdisho xittaa waxaa la ii sheegay in gudniinku ay caadi ka tahay waxay leeyihiin fircoon ma sameyno, dadka sidaa samaynaya iyaga xittaa daliil diimeed ma hayaan. Dalkan Holland, culimadii ayaa ka hadashay oo dadka ka wacyigelisay in gudniinka gabdhaha ah aanu diin wax shaqa ah ku lahayn, waxaa nala mid ahaa dalal dhowr ah oo Afrikaan u badan, waxaa ka hadlay culumaa’udiin isugu jira Marookaan, Turki, Aljeeriya, Tuuniisiya, kuwaas oo dadka u sheegay in aysan ku kadsoomin.
SU’AAL: Waxaa la sheegaa in ay jiraan hooyooyin gabdhaha dalkii ama dalal kale ku celiya, halkaas na ku soo guda, kuwaasi maxay mudan karaan.?
ZAHRA: Qolyahan “Groen Amsterdam” waxaa la leeyahay dad ayaa la wadaa, weliba Soomaalida ayaa farta lagu fiiqaa, oo waxaa la leeyahay Kenya ama Soomaaliya ayeey gabdhaha geeyaan halkaas ayeey ku soo gudaan, arrintiina wax cadayn sax ah looma hayo oo qof lagu qabtay ma leh, haddii gudniin la soo qaato mar walba Soomaalida un ayaa la soo qaataa, haddii la tuhmo qofka, ee hadhow dambi lagu helo waxaa lagu xukumayaa 12 sanno oo xabsi ah iyo 70 Euro oo ganaax ah, arrintaas marar badan waa ka digay laakiin sidaas oo ay tahay waqtiga kulaylaha gabdhaha waa la wadaa, gabdhuhu marka ay waynaadaan ama hooyo noqdaan dhaqaatiirtii ayaa arkaysa, inkastoo ay yaraatay, haddana Soomaalida waxaan xasuusin lahaa in arrintaani ay faraha ka qaadaan.
SU’AAL: Gabdhaha dalkan ku dhashay, ama ku koray iyo kuwa wax ku bartay, ee doonaya in ay soo gaaraan halka aad adigu maanta joogto, maxaad talo ku siin lahayd.?
Zahra: Genertion-kii 90kii dalkan yimid iyo kuwa maanta farqi wayn ayaa u dhexeeya, 30 sanno ayaa ka soo wareegtay. Dadkii halkan ku dhashay ama yaraan ku yimid waa dad wax bartay oo dadkooda dhinac ka raacay, annaga waxaan ahayn dad Ingiriis luqad ahaan u yaqaan, oo dalkan waynaan ku yimid, waxyaabaha ay naga qaadan karaan waxaa ka mid ah samirka, iyagu dhaqanka dadkaan ayeey u dhawaadeen.
SU’AAL: Inkastoo aad tahay qof ka shaqeeya arrimaha bulshada, haddana waxaa tahay hooyo, waxa jirta in warbixinanno sannadle ah oo ay soo saaraan hay’ado madax-bannaan, kuna saabsan sida ajnabiga dalkan ku dhaqan ay uga faa’ideystaan fursadaha dhanka waxbarashada iyo shaqada ah ee ay dalkan ka helaan, Soomaalidu waxay liiskaasi kaga jirtaa halka ugu hooseeya, maxaa u sabab ah ayay kula tahay.?
ZAHRA: Sannad kasta waxaa la soo saaraa warbixinno dhinaca waxbarashada ah, intii hore waa dhaanaa, 5 sanno ka hor meeshii aan joognay hadda ma joogno, haddii aad aragto niveu-ga ilmaheena gaar ahaan gabdhaheena HBO ayaay u badan yihiin, waxaad moodaa inaan soo kabanayno, laakiin waagii hore dib u dhaca waxaa inoo keenay waxay ahayd; waalidkii oo aan afkii aqoon iyo waalidkii oo caruurta ku leh waxaad noqotaa dhaqtar ama injineer iyo caruurtii oo ay ku adkaanayso in ay xaaladaasi wajahaan. Dib u dhaca kale ee na haystaa wuxuu yahay inaan sannad walba kaalimaha hore ka galno dadka ajnabiga ah ee lacagta Cayrta ah qaata, oo waxaa la leeyahay Soomaalidaa u badan dadka cayrta qaata, haddana waxaa nalagu tilmaa Soomaalidu in ay yihiin dad firfircoon oo haddii ay jaanis helaan ka faa’idaysta.
SU’AAL: ma ii sheegi kartaa maadaama muddo dheer oo ku dhow 30 sanno aad ka soo shaqeyneysay arrimaha bulshada, gaar ahaan kuwa Soomaalida dalkan ku dhaqan, muxuu noqon karaa Legecy-ga lagu soo xasuusan karo Zahro.?
ZAHRA: Ma jirto howl aan keligeey qabtay, mar walba koox ayaan ku shaqayn jirnay, anigu waxaan isu arkaa qof shaqadan u soo dhabar adaygtay, waajibaadkeediina u gudatay sidii ugu wanaagsaneyd, midna xasuuso shaqadan laftigeeda qabashadeeda in loo bareero ayaa ahayd wax adag markii la billaabayay, waxaa laga yaabaa in bulshadii aad u shaqeyneysay laftigeeda ay dhibaato kaa soo gaarto, lagu magac-xumeeyo, lagu masabito, inta badan waxaa ALLE mahadiis ah in dadkii aan la soo shaqeeynay iyo kuwii aan u qidmaynay intooda badan inay ahaayeen dad aan wanaag iyo xushmad kala kulanay, aniga waxaa halku dhigaygu uu yahay samir iyo adkeysi.
SU’AAL: Maadaama waqti dheer aad soo shaqeysay adiga iyo saaxiibada aad isku xilliga tihiin, ma ku talo jirtaan inaad fursad siisaan jiilalka cusub,
ZAHRA: Horta shaqooyinka aan qabano ma ahan kuwa Soomaali keliya loogu shaqeeyo, aniga waxaan la shaqeeyaa dadyow u dhashay dalal kala duwan, una badan Afrikaan, waxaa ALLE mahadiis ah dadkii na la shaqeyn jirnay iyo kuwa aan tababarnay intuba in qaarkood ay la shaqeynayaan GGD-da. Teeda kale, dad shaqooyinkan tababar ku qaatay ama Soomaali ha ahaadaan ama Afrikaan kale ha noqdaan oo shaqadan qaban kara waa jiraan.
SU’AAL: Su’aal kale oo dalkeenii ku saabsan haddaan ku waydiiyo, maxaa u sabab ah ayeey kula tahay in Soomaaliya muddooyinkan ay ku soo bataan gabdhaha inta la kufsado haddana la dilo.?
ZAHRA: Waa su’aal meesha ku jirta, dhaqankan waayadan dambe waa nagu soo kordhay oo marar badan ayaan aragnay gabdho yaryar oo kuwa la dilay, kuwa na la kufsaday xittaa saqiiro la fara xumeeyay waa la arkay, waa falal xun xun oo aad looga naxo. Anigu waxaan qabaa falalkan waa jiri jireen, ee isbeddelka waxaa keenay waa warbaahintan Digital-ka ah iyo baraha bulshada oo daqiiqad walba wixii dhaca la soo dhigayo, haddana waxaad arkaysaa in meelaha qaar wixii dhacay si xun loo tarjumayo waayo wax walba inta aadan dhagaha iyo indhaha bulshada u soo bandhigin waa inaad cilmi baaris sameeysaa. Waxaan isku dayay inaan ogaado waxa falalkan soo celceliyay, dadkii markii aan waydiiyey waxay leeyihiin; dhalinyaradu intooda badan waxay isticmaalaan waxyaabo maan-dooriyayaal ah. Dalalkan Yurub xittaa way ka dhacaan waxaas, qof wayn oo caruur yaryar fara xumeynaya, qofkaas wuxuu qabaa xanuun. Waxaa runtii aad ugu xumahay in dhinaca sharciga aan weli qaraar laga soo saarin, 2018 ayaa baarlamaanka la geeyey sharci kufsiga ilaa maanta oo ay taariikhdu tahay 11 Oktoobar waxba lagama qaban. Sheekooyinka aan maqlay waxaa ka mid ah gabadha haddii la kufsado ama la dilo reerkii dhibanaha waxaa u tegaya odayaal ama xildhibaanno arrintii faataxo iyo dhaqan Soomaali ayaa lagu dhamaynayaa, waxaas oo dhan waxaa ka waynaan lahaa haddii uu sharci jiro in sharcigaas qofka dambiga gaystay lagu qaado, qofkii kale ee falkaasi ku dhiiran lahaa cashar ayeey u noqon lahayd.